हेल्मेट आफ्ना लागि कि सरकारका लागि लगाउने ! | NepalDut
हेल्मेट आफ्ना लागि कि सरकारका लागि लगाउने !
सुमन बराल झापा, हाल : स्वीडेन
महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भन्दै यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गरी मटरसाइकल तथा स्कुटर चालकले मात्रै नभई पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा अनुरोध गरेको छ । नयाँ सवारी ऐनमा आईएसओ मान्यता प्राप्त हेलमेट अनिवार्य गर्न लागिएको छ । यसले नेपालमा ठूलो बहस निम्त्याएको छ । सुरक्षाका लागि भन्दा पनि अर्बौको व्यापार हुदा पाइने कमिसनमार्फत नीतिगत भ्रष्टचार गर्न महानगरीय ट्राफिक महाशाखा लगायत निकाय लागिरहेको आरोप लगाउनेहरु विपक्षमा उभिएका छन । अर्कोतिर, सुरक्षाका लागि सरकारले अनिवार्य नगर्दा पनि आफै लगाउनुपर्ने हेलमेट अनिबार्य गर्नु जायज हो भन्ने तर्क गर्नेहरु हेलमेट अनिवार्य बनाउने प्रस्तावको पक्षमा उभिएका छन् ।
डा उपेन्द्र देवकोटाले स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम ल्याएका थिए तर हेल्टेम लगाएर पछाडि बस्ने व्यक्ति अपराधका घटनामा संलग्न भएको भन्दै यो व्यवस्था हटाइयो । देशभर २७ लाख मोटरसाइकल तथा स्कुटर रहेको र १२ अर्बभन्दा बढी विदेशिने, अपराधिक कृयाकलाप बढ्ने, बाइकमा हेलमेट राख्न समस्या हुने, हेलमेट चोरी हुने, सडक राम्रो नभएकाले हेलमेटले दुर्घटना नघटाउने, भारतमा हेलमेट अनिवार्य छैन लगायत कारण देखाएर हेलमेट अनिवार्य गर्नु हुँदैन भन्नु मूख्र्याइ हो ।
मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने मानिस दुर्घटना हुनासाथ हुत्तिने भएकाले उच्च जोखिममा हुन्छ । घाइते हुने र मृत्यु हुने तथ्यांक हेर्दा पनि पछाडि बस्नेलाई बढी खतरा देखिन्छ । तसर्थ काठमाठौमा मात्र नभई देशभर चालक र पछाडि बस्नेलाइ पनि हेलमेट अनिवार्य गर्नु पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हेलमेट विरुद्धका कमेन्ट र कुतर्क हेर्दा यस्तो लाग्छ धेरैलाई आफ्नो सुरक्षाप्रति कुनै मतलब छैन । निसन्देह, नेपालमा न्यायालयदेखि लिएर भ्रष्टाचारमा नमुछिएको संस्था अपवादबाहेक कुनै पनि छैन भन्ने प्रमाणित तथ्य हो । नक्कली लोडसेडिङ गराएर दशकौं अन्धकार नै बेचे भ्रष्टहरुले, कसैलाई कारबाही भएन र हुँदैन पनि । ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कुनै ठूला नेतालाई दण्डित गरिएन र गरिने सम्भावना पनि छैन तत्काल । अर्थात् प्रत्यक्ष र परोक्ष घूस र कमिसन नखाई कुनै काम बन्यो भने अचम्म हुने स्थिति पक्कै छ । तथापि कतिपय कुरा नागरिकले आफ्नै सुरक्षाको लागि गर्नु पर्दैन र ? सरकारका लागि वा जरिवाना बाट बच्नमात्रै गरिदिने हो ?
मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने मानिस दुर्घटना हुनासाथ हुत्तिने भएकाले उच्च जोखिममा हुन्छ । घाइते हुने र मृत्यु हुने तथ्यांक हेर्दा पनि पछाडि बस्नेलाई बढी खतरा हुन्छ ।
नेपालमा हेल्मेट बिक्रीबाट कमिसन खानलाई अहिले पछाडि बस्ने लाइ पनि अनिवार्य बनाउन लागिएको हो भने त्यसको विरोध गर्दै उचित मूल्यमा किन्न मिल्ने वातावरण बनाऔं । केही दिन हेलमेट बिक्रीमार्फत कमिसन खानलाई मात्रै भने ऐन सीमित नहोस् भनेर खबरदारी गरौं । नेपालमा नै मापदण्ड अनुसारको हेल्मेट कम्पनी खोलौ । सकिएन र नेपालमाभन्दा सस्तो पाइए भारत, चीन वा कुनै अर्को देशबाट किनौं । तर नेपालमा हेल्मेट बन्दैन भन्दैमा हेल्मेट नै नलगाऔं नभनौं । नेपालमा त गाडी, प्लेन, ट्रक लगायत केही पनि बन्दैन । अब केही पनि उपभोग नगर्ने हो त ?
धेरै औषधि र उपचारमा लाग्ने उपकरण नेपालमा उत्पादन हुँदैनन्, अब रोगी भएर नै मर्ने त ? हेल्मेट सरकारका लागि नभई आफ्नै लागि लगाऔं किनकि दुर्घटना हुँदा टाउकोमा गम्भीर चोट हुने जोखिम कम गराएर हेल्मेटले ज्यान जोगाउन सहयोग गर्न सक्ने प्रमाणित तथ्य हो ।
विकसित देशहरुमा जस्तै बयस्कले मात्र नभई बालबालिकाको सुरक्षाका लागि पनि विशेष ध्यान दिएर सानो हेलमेट अनिवार्य लगाइदिनु राम्रो हो । मोटरसाइकलमा सवरले हेलमेट लगाउने, सवारी साधनमा सिट बेल्ट अनिवार्य लगाउने, अत्यन्त तीव्र गतिमा सवारी साधन न चलाउने, ट्राफिक नियम पालना गर्ने, सवारी साधन नियमित मर्मत गर्ने, जाँड र रक्सी खाएर सवारी साधन नकुदाउने, भूकम्प जस्ता प्रकोपलाई मध्यनजर गरेर घर निर्माण गर्दा मापदण्ड पालना गर्ने, बिरामी हुँदा चिकित्सककोमा जाने, नियमित कसरत गर्ने, गर्न सकेसम्म स्वस्थकर कुरामात्रै सेवन गर्ने लगायतका विषयमा सरकार जति नै भ्रष्ट र बेइमान भए पनि नागरिकले आफ्नै लागि आफै विशेष ध्यान दिनु पर्दैन ? कि सरकारका लागि गरिदिने हो ?